Madaxweyne Siilaanyo Oo Seefta La Dhex Qaadi Doona Golaha Wasiirada Xubnaha Ugu Tunka Weyn | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweyne Siilaanyo Oo Seefta La Dhex Qaadi Doona Golaha Wasiirada Xubnaha Ugu Tunka Weyn
Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa la filayaa inuu seefta la dhex qaadi doono qaybaha kala duwan ee Xukuumadda uu hoggaamiyo, isla markana shaqada ka caydhin doono qaar ka mid ah gollaha wasiiradda kuwooda ugu tun-ka weyn. Madaxweyne siilaanyo ayaa la sheegay inuu xaaladdo badan oo la soo dersay Siyaasadda dibeda iyo gudaha uu qaadi doono tallaabo in badan laga sugaayey. kuwaas oo uu shaqada kaga caydhin doono wasiiro, wasiir ku xigeeno, agaasimayaal, Gudoomiyaasha Hay’daha Madaxa-banaan ee Dawliga ah iyo weliba Badhasaabbo.
Wasiirada sida weyn loo hadal hayo waxa ka mid ah, wasiirka Madaxtooyadda S/Land Md Xirsi Cali Xaaji Xasan oo la sheegay Madaxweyne siilaanyo inuu go’aan saday shaqo ka fadhiisintiisa iyo inuu geeyo meel kale. Waxana wararka laga helaayo ilo-wareedyo si weyn ugu dhuun-daloola Qasriga Madaxtooyadda Somaliland sheegen bedelka Wasiirka Madaxtooyadda ay keentay xaalad Xukuumadda dhexdeeda ka jirta awgeed, taas oo mudooyinkii uu danbeeyey isaa-soo taraayey waxa kale, oo xogaha la helaaya sheegayaan in ay suurto gal tahay in loo bedelo Wasaaradda Hawlaha Guud maadaama oo uu dhaqaalihii wadooyinka uu gacanta ku hayo Wasiir Xirsi oo ay suurto gal tahay hadii la eryo inuu lunsado Lacagta Wadooyinka oo aan ku dhicin qasnadda Dawladda balse uu maammulo.
Xubnaha la filayo in heeryadooda debedda la dhigayo waxa ka mid ah, wasiir Hawlaha Guud iyo Guryeynta C/risaaq Khaliif oo la sheegay in aanu mudooyinkii danbe isku sanbanaaneyd Madaxtooyadda, laga bilaabo markii shaqada la caydhiyey Saaxiibkii wasiir Samaale Waxa kale, oo xubnaha sida weyn loo saadaalinaayo inuu Madaxweynaha Somaliland ka caydhiyo shaqada ka mid ah Wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Cabdilahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo la xusay inuu Madaxweynaha Somaliland haddiiba uu qalin u qaato isku shaandheyn inuu yahay Ninka koowad ee la bedelo.
Ilo wareedyada arrintan laga helayo ayaa waxay intaas ku darayaan in Wasiirrada xilka qaadistu saameyn doonto inuu ka mid yahay Wasiirka Caddaaladda Xuseen Axmed Caydiid oo la sheegay inuu Madaxtooyadda marar badan fagaarayaal eedo uga jeediyey wasiirka arrimaha dibeda Maxamed Bixii Yoonis. Wasiirka wasaaradda xidhiidhka goloyaasha Md Cali Xaamud Jibriil ayaa isna ka mid noqon doono Wasiiradda seeftu la tegi doonto ,dhinaca wasiirul-dawlayaasha waxa ay wararku tilmaameen wasiir u dawlayaasha inuu ka mid yahay wasiirul-dawlaha Maaliyadda Cismaan saxardiid Cadaani, Wasiir –dawlaha wax-barashadda. Geesta kale, waxa suuro gal ah inuu Madaxweyne Siilaanyo shaqada ka Caydhin doono agaasimaal Guud, Gudoomiyayaasha hay’adaha madaxa-banaan ee Dawligga ah iyo weliba Badhasaabyo lafilayo inuu ka mid noqdo Badhasaabka Sanaag Mr-Fly isagoo kuwo kalena wasaaradda uu kala bedeli doono.
Docda kale, waxa jira warar saadaalinaaya Wasiiradda Cusub ee ku soo biiri doono Xukuumadda inay ka mid yihiin Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Axmed Xaaji Daahir Cilmi oo la sheegay inuu bedeli doono wasiir Cukuse. Waxa isna ka mid ah wejiyadda cusub ee ku soo biiri doona Xukuumadda uu hoggaamiyo Axmed Siilaanyo, Eng Cali sanyare oo ka mid ahaa wasiiraddii Udub iyo xoghayaha Qorsheynta ee Xisbiga Waddani Cabdi Rashid riyo rac oo aan la ogeyn inuu aqbali doono balse la sheegay in uu jiro xidhiidh dhex maray Madaxtooyadda waxana la sheegayaa inuu Madaxweynuhu la doonayo inuu noqdo Wasiirul-dawlaha Waxbarashada. Inkasta oo aanay inta ku koobnayn Masuuliyiinta Cusub ee xilalka Qaranka lagu tixi doono, haddana waxa muuqata in laga maarmi waayey Masuuliyiintii la soo shaqeeyey Dawladdii hore ee UDUB. Sidoo kale waxa xoguhu tilmaameen in wasiir ku xigeenkii hore ee Caafimaadka Mahdi Cismaan Buuri uu ka mid noqon doono wasiir ku xigeenada la Magacaabayo.
Si kastaba ha-ahaatee Shacabka reer Somaliland ayaa Bishan June gudaheeda Madaxweynaha S/land ka filayey inuu wax ka bedel ku sameeyo Xukuumadda uu gadh-wadeenka ka hayay. Iyadoo ay jiraan xaalad siyaasadeed oo cakirani inay dalka ka jirto, hadaba waxa muuqata in is-bedelkani uu dhoola-tus uu noqon doono as-xaabta Mucaaridka ah iyo siyaasiyiinta inta badan Madaxweynaha ku eedeeya Taladiiba lagala wareegay Maadaama oo wasiir Xirsi sakal siyaasadeed ku jiro.